Bahrain: Mipongatra ny Fanoherana Ao Amin’ny Hopitalin’i Salmaniya · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Febroary 2011 3:44 GMT
Tonga hatrany amin'ny hopitalim-bahoaka lehibe indrindra eto amin'ny firenena ny sakoroka, taorian'ilay fanafihana niharo halozàna talohan'ny andro miposaka tamin'ny Alakamisy 17 Febroary natao an'ireo mpanao fihetsiketsehana tao amin'ny rond-point Lulu.
Hatramin'io fotoana io ny hopitaly, izay efa tototra rahateo isanandro, dia rakotr'ireo maratra marobe avy any amin'ny rond-point Lulu. Niraradraraka ny tatitra tao amin'ny Twitter mikasika ireo dokotera manohitra noho ny fiharatsian'ny fepetra ao anatin'ny hopitaly sy ny tsy fahampian'ny fiara mpamonjy voina hitaterana irao naratra noho ilay fanafihana io maraina io.
@angryarabiya Vavolombelona nahita maso: nivoaka daholo ireo tomponandraikitra rehetra tao salmaniya mba hilahatra ka nahitàna ireo dokotera sy mpitsabo mpanampy nangataka ny fialàn'ny minisitry ny fahasalamana
“Ireo mpitsabo ao Salmaniya – Ravao ny Ministera – Tsy misy na fiara mpamonjy voina iray aza ato amin'ny hopitaly”
Dokotera manao hetsika eo ivelan'ny hopitaly Salmaniya
@SandyWaterB http://yfrog.com/mijy2z Ao Salmaniya (tsindrio ny rohy eto ambany raha hijery ny lahatsary)
Mpitsabo mpanampy sy mpiasan'ny fahasalamana manao hetsika ao anatin'ny hopitaly
Mpiasan'ny fahasalamana vitsivitsy no naratra nandritra ny fiezahan'izy ireny hitondra ny naratra ho any amin'ny hopitaly.
@MDaaysi: voaporofo fa notafihana ny mpiasan'ny ministeran'ny fahasalamana #Bahrain #feb14 #PearlRoundabout RT @maryamalkhawaja: http://yfrog.com/hsq1aylj
Mpiasan'ny fahasalamana naratra tao amin'ny hopitalin'ny Salmaniya
Nanapa-kevitra ireo dokotera nony avy eo fa handao ny hopitaly ka handeha ho any amin'ny rond-point Lulu hitsabo ny sisa amin'ireo mpanao fihetsiketsehana naratra.
@hussain_info pic: ireo dokotera mahery fo dia nandeha an-tongotra nankany #lulu reraky ny nitsabo taorian'ny ora 5 namehezana ny ratran'izy ireny #bahrain http://yfrog.com/h088xjgj
Dokotera nihetsika nandeha an-tongotra ho any amin'ny rond-point Lulu Protesting Doctors march to LuLu Roundabout